1. Elinye lamaphoyisa nabaphenyi "abahle" (noma abalungile) Izincwadi Zamanje
Ngisanda kuqala Umkhumbi wokugcina, inoveli entsha nebhekwe kakhulu ngu UDomingo Villar nomhloli wakhe weVigo U-Leo Caldas njengo-protagonist. UCaldas ungomunye wamaphoyisa ambalwa kazwelonke engiwalandele ngokuzinikela isikhathi eside, ngoba ngiyisikhulu sezomthetho noma umphenyi ovela kwezinye izingxenye zomhlaba. Ngakho-ke sengibuyise i-bonhomie yakhe, umsebenzi wakhe omuhle nemikhuba yakhe emihle, isimo sakhe se-nostalgic ne-Galician kakhulu, futhi ngasikhathi sinye nokusebenza kwakhe kahle. Y Ngikhumbule abanye ozakwethu besikhathi esifanayo. Kubafundi bamanoveli obugebengu abakhetha uku labo abathembekile, abazidelayo, abaqotho nabangenakonakala izisebenzi zokuhleleka nobulungiswa.
1 Umuntu waseMelika, waseNorway, ongumNtaliyane, owaseFrance nowaseJalimane-waseScotland
1.1 Yini ababelana ngayo?
4 UMyron Bolitar - uHarlan Coben
5 ULuca Betti - uRomano De Marco
6 IHolger Munch - uSamuel Bjørk
7 Leo Leo - Domingo Villar
Umuntu waseMelika, waseNorway, ongumNtaliyane, owaseFrance nowaseJalimane-waseScotland
Yini ababelana ngayo?
Kunezinye eziningi, kepha Ngithathe isinqumo ngalezi eziyisithupha. Bonke baqhamuka ochungechungeni nababhali abanezizwe zabo. Futhi umuntu akayena owamaphoyisa, kepha ungumphenyi we-amateur, kepha ufaka uhlu lokuba ngomunye wabalingiswa abahle, abanomusa, abanobungane, abanomusa nokuzidela kubangani nezihlobo zabo. Konke ukwabelana izimfanelo ezifanayo iAkunandaba ngezinhlamvu zabo nemvelaphi yabo.
wakhe kusebenza kahle, ngobuqotho, ngokuzidela ngenxa yeqembu labo, abantu babo noma abangane babo, yize sebephenduke amahlaya afana nodaba lukaLuca Betti noMarco Tanzi, iphoyisa "elihle" kanye nephoyisa "elibi" elivela ochungechungeni lweMilan Negro olusayinwe nguRomano De Marco.
Futhi bathambekele ekubeni nesizungu nokudangala, ngisho nokudangalaimpela ngoba bayayibona leyo mvelo ethembekile futhi ephanayo. Kepha ngokuqinisekile bonke babelana ngesidingo ungavumeli uhlangothi oluthandekayo nolunamandla lobubi bahlala nobani kangaka. Yebo, kungenzeka kube yinselelo enzima kakhulu ukuba muhle kunokubi kule noveli yobugebengu.
Umphathi waseFrance we Amaphoyisa aseToulouse UMartin Servaz uhlupheka ikakhulukazi lokho ukucindezeleka kanye nezidingo ukwelashwa kochwepheshe ngesikhathi esibuhlungu kakhulu. Yilokho okufanele ibhekane nakho phakathi kwamanoveli amane kuya ku- Imesis engenasihluku ngalo, okwamanje, kubonakala sengathi ayikho indlela yokuphela.
UBernard Minier usethule yona ku- Ngaphansi kweqhwa futhi siyaqhubeka Umbuthano, Ungacimi isibani y UNoche. Futhi kube ngomunye walandela kakhulu uhlobo. IServaz yaziswa ngakho uzwela (kakhulu mhlawumbe vele vele esihlokweni sokugcina) nokuthi unikele kanjani ngengxenye enhle yokuzinza kwakhe ngokomsebenzi wakhe.
Impi yakhe ishubile ngokungafani nalowo psychopath ongenakunqotshwa obamba abaningi futhi amshushise ngokungapheli. Futhi sihlupheka naye ngenxa yendodakazi yakhe, ngokulahlekelwa kwakhe nangokwakhe umzamo oqhubekayo ekunqobeni ukwesaba kwakho, kodwa ukwenze kahle.
UJan Fabel unjalo Khomishani Lomkhulu Wemaphoyisa eHamburg. Uhhafu weScotland nesiqingatha saseJalimane, unalezo zingxenye ezifanele awabelana nomdali wakhe, iScotsman esithanda isiJalimane nowayephoyisa UCraig russell.
UFabel uqonde waze wathi kwanele, uhlanzekile ngezindlela zakhe futhi uqine kodwa uyacabangela neqembu elimhloniphayo nelimthandayo. Naye, ngokufanayo, uhlala njalo okulindile kubo kanye nendodakazi yakhe, esengozini izikhathi ezingaphezu kwesisodwa. Ubuye azwane ngokumangazayo nowayengunkosikazi wakhe, yize abafundi bengasola ukuthi akayona ikolweni ehlanzekile ngezikhathi ezahlukahlukene.
Sikubonile kuphela uhhafu wentekenteke kanye (okungekho) ezingeni lomuntu siqu, lapho ephonsa izinwele ezimpunga ezingalindelekile emoyeni e-El Señor del Carnaval. Lapho ebhekene nokulunga okunjalo, mhlawumbe uRussell wamnika ikhefu, wasebenzisa lowo mkhuba womkhosi eCologne. Kepha ikhombisa ukulawula okunamandla kwayo yonke imizwa yakho, ngisho nalabo bethu abafuna ukukuqagela ngengxenye yeqembu lakho. Kimina iyona engathinteki kakhulu.
UMyron Bolitar - uHarlan Coben
I-American Harlan Coben idale umdlali wangaphambili we-basketball, omele ezemidlalo kanye nomcwaningi we-amateur I-Myron bolitar kulokho umngane sonke esifuna ukuba nawo. Awukwazi ukucela ukuzwelana nokwengeziwe noma ukuzimisela ukusiza nokunakekela abanye lapho benenkinga. Ngaphezu kwalokho, uyindodana ephelele enothando oluzinikele ngokuphelele kubazali bakhe. Futhi-ke isoka elihamba phambili futhi elithandana kakhulu, njalo lihamba phambili.
Kodwa into ethakazelisa kakhulu ubuhlobo bothando olungenamibandela nokusekelwa nomngani wakhe omkhulu Win Winwood, okuphambene, okumnyama nokubi okuyisibuko sesibuko esifanayo. Ngokubambisana abanakunqotshwa ngokuhambisana futhi bangomunye wemibhangqwana yokubhala engcono kakhulu yalolu hlobo.
ULuca Betti - uRomano De Marco
Kuyafana ne- ULuca betti noMarco Tanzi. URomano De Marco udale la maphoyisa amabili ochungechungeni UMilan Mnyama ezakhiwa Wanyamalala y Idolobha lothuli. Kufanele ube njalo abantu abalunge kakhulu, futhi kakhulu ngendlela yase-Italy, ukuqeda ukusiza umlingani wakho nomngani wakho omkhulu ngelinye ilanga wadlulela ohlangothini olumnyama futhi wakukhohlisa nonkosikazi wakho, kodwa ogcine ngokuhlala emgwaqweni bese indodakazi yakhe iyanyamalala.
ULuca Betti olungile akagcini ngokusiza uTanzi, kepha kufanele abhekane nalowo owayengunkosikazi wakhe asathandana naye, kanye nendodakazi yakhe, kanye nomlingani omusha ofika emnyangweni. Iphuzu ukuthi kuthinta ukwethembeka kwakhe nokuthi ukwamukela kanjani ukuthi akakwazi ukusiza ukuba kanjena, yize kunezinkinga ezithe xaxa kanye nethuba lokushiswa futhi. Ngakho-ke awukwazi ukuzibamba kodwa futhi.
IHolger Munch - uSamuel Bjørk
UMunch ngukhomishani lowo umakadebona, ukuqonda, ubaba omuhle, umyeni nogogo. Futhi emsebenzini wakhe uphethe iqembu naye azizwa ngalo mentor. INorway Samuel Bjørk idalelwe ku- Ngihamba ngedwa y Isikhova isibonelo esibonwe kancane kulezo zingxenye zeNordic zephoyisa elimnene, elizama ukuthatha amacala amabi kakhulu ngokulawula okukhulu kakhulu.
UMunch ngesinye isibonelo nozakwabo eMia Krüger, umhloli osemncane kodwa ongazinzile okufanele aphendukele kuye futhi ukuze asebenze. Ngakho-ke uyakwazisa ukuthula kwabo okuthile.
Leo Leo - Domingo Villar
Ngaphezulu kweGalician kune-octopus ukuze feira futhi kuhle kakhulu kunaleso sinkwa sezwe labo. Futhi ngalokhu kuthintwa kokungabi nakhaya, i-nostalgia kanye ne-retreat okuveza abantu bakubo. ULeo Caldas naye esebenza kahle, engakhathali, enembile futhi enesandla esiningi sobunxele. Kepha futhi kuhle gourmet, a ndodana elalelayo futhi ekhathazekile ngoyise futhi ephawuleka kakhulu ngokufa kukanina ngaphambi kwesikhathi. Futhi ngaphezu kwakho konke kulimale kakhulu ukuhlukana kwemizwa.
Yebo futhi Umphikisa kumsizi we-Aragonese ngaphandle kokubhidliza noma ukukala, ungathinteki ukuhlehla kweGalician, kepha uthembekile, uthembekile futhi unesinqumo esinamandla, uthola eyodwa ye imibhangqwana ehamba phambili yohlobo lwabomnyama bomdabu. Sebevele bane-trilogy yabo nayo Amehlo amanzi, Ibhishi labacwile y lokhu Umkhumbi wokugcina.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » 1. Elinye lamaphoyisa nabaphenyi "abahle" (noma abalungile)
Ingxoxo noDavid Zaplana no-Ana Ballabriga: Lapho impumelelo ifika ezandleni ezine.